ခေတ်သစ်အိပ်ခန်းပရိဘောဂ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-bestparticleboardfurniture.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ခေတ်သစ်အိပ်ခန်းပရိဘောဂ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 010-13-1
ထိုလုလင်သည်,ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း Beyoung အိပ်ခန်း set ကိုကျွန်းသစ်သစ်သားအရောင်အတွက်တောက်ပအလှဆင် panel ကိုနှင့်အတူ၎င်း၏အောက်ခြေအရောင်အဖြစ်အေးဆေးတည်ငြိမ်ဆောင်းဦးရာသီမီးခိုးရောင်ကိုအသုံးပြုသည်.ဒါဟာငြိမ်းချမ်းနေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတစ်ဦးနွေဦးဖြစ်ပါသည်.အဆိုပါဓာတ်လှေကား-headboard box ရဲ့ချတံခါးကိုသိုလှောင်မှုဖွ.အဆိုပါစင်ပေါ်လက်အောက်တွင်,ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ္စည်းများများအတွက်နေရာရှိပါတယ်.သငျသညျအိပျပျြောမတိုင်မီစာဖတ်ဖို့အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်,သင်အလွယ်တကူနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ပွင့်လင်းကဖေးတွေမှာသင်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ထားယူနိုင်ပါသည်.အဆိုပါ headboard အစိုးရအဖွဲ့နှင့်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားစားပွဲပေါ်တွင်အဆိုပါအလှဆင်ပြားလက်ကိုင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် beveled နေကြတယ်.အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုသာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲအံဆွဲလွယ်ကူစေသည်,ဒါပေမယ့်လည်းအာကာသကိုတက် spices.
Headboard သေတ္တာ(W က 158cm x ကို: D 25cm x ကို H ကို 99cm),ဆွဲပါ-အိပ်ရာဘောင်မှထွက်(W က 155cm x ကို: D 189cm x ကို H ကို 30 ရက်.5cm),Headboard ကက်ဘိနက်(W 57cm x ကို: D 38cm x ကို H ကို 47cm),ဆေးထည့်စားပွဲ(W 60cm x ကို: D 53cm x ကို H ကို 125cm),မှန်တွေနဲ့ Wardrobe(W 37cm x ကို: D 43cm x ကို H ကို 176cm),ဆေးထည့်မစင်(W က 51.4cm က x: D 32cm x ကို H ကို 44.8cm)
ပစ္စည်း:အဆိုပါဗီဒိုအဘို့အ V313 စနစ်ကဘုတ်အဖွဲ့,တံခါးနှင့်စင်ပေါ်
တံခါးကိုနှင့်အံဆွဲမျက်နှာစာ:18mm E1-V313 စနစ်ကဘုတ်အဖွဲ့
Backboard နှင့်အံဆွဲအောက်ဆုံး:8 မီလီမီတာ E1-V313 ဘုတ်အဖွဲ့
edge တီးဝိုင်း:ရှေ့ပြားများနှင့်တံခါးများအပေါ် banding ထူကို ABS အစွန်း
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestparticleboardfurniture.com/my/modern-bedroom-furniture.html
ခေတ်သစ်အိပ်ခန်းပရိဘောဂ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ခေတ်သစ်အိပ်ခန်းပရိဘောဂ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ OEM ODM-ကျော် 11,586 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestparticleboardfurniture.com